म कसरी मेरो आईफोनमा अनावश्यक कलहरू ब्लक गर्ने? एक द्रुत फिक्स! - आईफोन
ipad मृत्यु को कालो पर्दा
सेलुलर डाटा के को लागी प्रयोग गरीन्छ
किन मेरो आईफोन सेवा प्राप्त गर्दैन
मेरो आईफोन स्क्रिन टच कसरी ठीक गर्ने
म कसरी मेरो आईफोनमा अनावश्यक कलहरू ब्लक गर्ने? एक द्रुत फिक्स!
उनीहरूले तपाईंलाई फेरि कल गर्दैछन्! यो मित्रता अमिलो भयो वा अपरिचित क्लाइडे नाम गरेको कसैको लागि सोध्नु राम्रो हुन्छ, कसरी आईफोनमा अनावश्यक कलहरू ब्लक गर्ने बारे जान्नु राम्रो हुन्छ। यस लेखमा, म तपाईंलाई कसरी तपाइँको आईफोन प्रयोग गर्न रोक्न (र अनब्लक) फोन नम्बरहरू प्रयोग गर्दछौं जसले तपाईंलाई एक्लै छोड्दैन।
कुनै कल छैन, कुनै टेक्स्ट छैन, कुनै आईमेसेजेस छैन, कुनै फेसटाइम छैन।
तपाईंले फोन कल, सन्देश, वा फेसटाइम निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुहुने छैन जब तपाईं आफ्नो आईफोनमा कलर अवरुद्ध गर्नुहुन्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाई फोन नम्बरबाट सबै कुराकानीहरू ब्लक गर्दै हुनुहुन्छ, भ्वाइस कल मात्र होईन।
ब्वाँसाको बारेमा सपना देख्नुको अर्थ के हो?
म कसरी मेरो आईफोनमा कल र सन्देशहरू रोक्न सक्छु?
१. व्यक्तिलाई सम्पर्कमा जोड्नुहोस्
एक iPhone मा कल ब्लकिocking काम गर्दैन जब सम्म तपाईं पहिले आफ्नो सम्पर्कहरूमा फोन नम्बर थप्नुभयो। तपाईं अर्को चरणमा स्किप गर्न सक्नुहुन्छ यदि फोन नम्बर पहिले नै तपाईंको सम्पर्कमा भण्डार गरिएको छ। नोट: मैले यस लेखको लागि लिएको स्क्रीनशटमा वास्तविक फोन नम्बरहरू सेतो आउट गरे।
तपाईको भर्खरको कलकर्ताहरूको सूचीबाट सम्पर्कमा फोन नम्बर थप्न यो सजिलो छ। जाऊ त्यहाँ फोन -> भर्खरको ( भर्खरको तल एक आइकन हो) र तपाईंले ब्लक गर्न चाहानुभएको फोन नम्बर फेला पार्नुहोस्। ट्याप गर्नुहोस् गोलाकार निलो 'म' त्यस कलरको बारेमा जानकारी ल्याउन फोन नम्बरको दायाँ तिर।
ट्याप गर्नुहोस् नयाँ सम्पर्क सिर्जना गर्नुहोस् तपाईंको सम्पर्कहरूमा फोन नम्बर थप्न। पहिलो नाम फिल्डमा, व्यक्तिलाई एक नाम दिनुहोस् जस्तै 'अवरुद्ध १' र ट्याप गर्नुहोस् भयो माथिल्लो दाहिने कुनामा।
फोन -> भर्ता र ट्याप निलो 'म'
फोन नम्बर को बारेमा जानकारी
नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्
सम्पर्क आईफोनमा सुरक्षित गरियो
२. तपाईंको अवरुद्ध कलरहरूको सूचीमा फोन नम्बर थप्नुहोस्
खोल्नुहोस् सेटिंग्स -> फोन र ट्याप गर्नुहोस् अवरुद्ध तपाईंको आईफोनमा ब्लक गरिएको कलरहरूको सूची ल्याउन। ट्याप गर्नुहोस् नयाँ थप्नुहोस् ... र तपाइँका सबै सम्पर्कहरूको एक सूची देखा पर्नेछ। ट्याप गर्नुहोस् खोज्नुहोस् सीधा तल सबै सम्पर्कहरू र व्यक्ति ब्लक गर्न को लागी व्यक्तिको नामको केहि अक्षरहरू टाइप गर्नुहोस्। यदि तपाईंले अन्तिम चरणमा आफ्नो सम्पर्क थप्नुभयो भने, तपाईंले टाइप गर्नुभयो 'अवरुद्ध १'। सम्पर्कको नाम ट्याप गर्नुहोस् तपाईंको अवरुद्ध कलरहरूको सूचीमा यसलाई थप्नको लागि।
सेटिंग्स -> फोन -> रोकिएको छ
नयाँ थप्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस् ...
सम्पर्कको लागि खोजी गर्नुहोस्
कलर आईफोनमा रोकिएको छ
म कसरी मेरो आईफोनमा नम्बर अनब्लक गर्ने?
उफ्! तपाईंले 'संयोगले' सूचीमा हजुरआमा थप्नुभयो र उनी खुशी छैनन्। तपाईको आईफोनमा कलर अनब्लक गर्न, जानुहोस् सेटिंग्स -> फोन र ट्याप गर्नुहोस् अवरुद्ध अवरुद्ध कलरहरूको सूची अवलोकन गर्न। सम्पर्कको नाममा दायाँ देखि बाँया स्वाइप गर्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् अनब्लक जब यो देखिन्छ।
फोन कल र सन्देशहरू बन्द भयो र तपाईं आफ्नो सामान्य तालिकामा फर्कनुभयो। परिस्थितिहरू जसमा कल ब्लकि require आवश्यक पर्दछ सामान्यतया राम्रो हुँदैन, तर यो आईफोनमा अनावश्यक कलहरू कसरी ब्लक गर्ने भनेर जान्नको लागि उपयोगी छ। मलाई आशा छ कि यस लेखले मद्दत गरेको छ र म तपाईं तल टिप्पणी अनुभागमा तपाईं सुन्न चाहन्छु।
dfu मोड आईप्याड एयर २
यो लेख मायालुपूर्वक मेरो अद्भुत हजुरआमा, Marguerite Dickershaid लाई समर्पित छ।